Windows 10 မှာ Windows Store ပေါ်ကနေ iTunes ကို ဘယ်လို Download လုပ်မလဲ? – MyTech Myanmar
Windows 10 မှာ Windows Store ပေါ်ကနေ iTunes ကို ဘယ်လို Download လုပ်မလဲ?
Microsoft က ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မကုန်ခင်က အခုလိုမျိုး Windows Store ကနေ iTunes ကို ရယူနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အခုအချိန်မှာ Windows Store ပေါ် ရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု Windows Store ကနေ Download ရယူလိုက်တဲ့ iTunes က သီးခြား Install ပြုလုပ်ထားတဲ့ iTunes Software မှာ ပါဝင်တဲ့ Features တွေအကုန်လုံးပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် iTunes ကို Update ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ပုံမှန်လိုမျိုး iTunes Software ကနေ ဆောင်ရွက်တော့မှာမဟုတ်ပဲ Windows Store ကနေ တစ်ဆင့် Update လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
MyTech Myanmar2018-06-01T21:50:39+06:30June 1st, 2018|Computers, HowTo|
အလုပျမရှိခြိနျ အှနျလိုငျးမှာ ဝငျငှေ ရှာနိုငျမယျ့ နညျးလမျးမြား
Facebook အပါအဝငျ Social Media လုံခွုံရေးကို ဘယျလိုကာကှယျမလဲ